एउटा चराको प्वाँख « paniphoto
« पानीफोटोमा ‘नेपालभरका एफएम’हरु लाईभ सुन्न सकिन्छ है ‘विवाह’ – व्यंग्य »	एउटा चराको प्वाँख
By -paniphoto- on Saturday June 09, 2012	-ध्रुब सापकोटा-
“कस्तो मिलेको ? तिम्रो शरीरको नापो लिएर सिएजस्तो” । राजकुमारको प्रतिक्रिया ।
“जडौरी हो ।” श्रीमतीको भनाइ ।
“यसलाई जडौरी मरिगए कसैले भन्दैन ।” लोग्नेले आफ्नो मनको शङ्का कसैमार्फत् व्यक्त गर्‍यो ।
“सत्य त्यही हो ।” श्रीमतीले भनी ।
“अब सत्य पनि सन्देहको घेरामा पर्न थालेको छ । के भएको होला ?” राजकुमारले भन्यो ।
“छलफल गर्न हामीसँग पूरै रात छ । अहिले म गएँ ।” श्रीमतीले भनी ।
“हुन्छ ।” राजकुमारले भन्यो ।
“आज म आउन ढिला हुन्छ ।” श्रीमतीले जनाउ दिई ।
“किन ?” लोग्ने बोल्यो ।
“लुगा धुनु छ । त्यो घरमा लुगा धेरै हुन्छन् ।” श्रीमतीले व्याख्या गरी ।
“त्यसकारण तिमीले सुट लगाएकी ।” लोग्नेले थप्यो ।
“सुट त त्यहाँ पुगेपछि फुकाल्ने ।” श्रीमतीले प्रष्ट पारी ।
“फुटेका रहेनछन् ।” राजकुमारले भन्यो ।
“जुनसुकै बेलामा फुट्न सक्छन् । हरेक दिन पानीमा नचली निर्वाह हुँदैन ।” श्रीमतीले भनी ।
“एक दिन पनि काम रोक्न नमिल्ने । कस्तो काम पाइएछ ।” राजकुमारले भन्यो ।
“यो छोडे अर्को काम पाइँदैन ।” श्रीमतीले भनी ।
“मेरो काम भयो भने त तिमीले कहिल्यै काम गर्न पर्दैन ।” राजकुमारले फकायो । श्रीमतीले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन । राजकुमारले आँैलाहरू छोडेर श्रीमतीको शरीर मुसार्न थालेको थियो । यसमा पनि श्रीमतीको स्वीकृति थियो । यसबाट राजकुमारले अर्को नयाँ कुरा पनि पत्तो लगायो । श्रीमतीको नितम्ब चीसो थियो । ढाडिएको ।
“एउटा कुरा भनौँ ?” चीसो नितम्बले राजकुमारलाई प्रश्न गर्न वाध्य बनायो ।
“भन न ।” श्रीमतीले स्वीकृति दिई ।
“काम नहुँदा अहिले म बेकम्मा देखिएको छु । एउटै मात्र काम होस्, म कोहीभन्दा कम हुन्न ।” राजकुमारले मनको कुरा पोख्यो ।
“मलाई त अर्काको घरमा भाँडा माज्दा र लुगा धुँदा दिक्क लाग्यो । बरू कतै पाले बन्न पाए हुन्थ्यो ।” श्रीमतीले भनी ।
“अहिले दोमन नगर । जे छ त्यसमा रमाऊ । राम्रा दिन आउँदैछन् ।” राजकुमारले तर्क दियो । राजकुमारले श्रीमतीलाई सान्त्वना दिन खोज्यो ।
“राम्रा दिनको पर्खाइमा वर्षौं बिते । अब कहिले आउने हुन् ती दिन ?” श्रीमतीले उल्टै प्रश्न गरी ।
“आज किन ढिलो बैनी ?” राजकुमारको प्रश्न थियो ।
“छिटो आएर पनि के गर्नु छ र ? कोही आएर गए भन्ने छैन ।” चेतनाले भनी ।
“तिनीहरू आउने बेला भएन र ?” राजकुमारको जिज्ञासा थियो ।
“के ठेगान छ र तिनीहरूको पनि । बूढाहरू । कहिले कता जान्छन्, कहिले कता ।” चेतनाको जवाफ थियो ।
“बूढाहरू परिवर्तनका पक्षधर हुँदैनन् । हत्तपत्त ठाउँ फेर्दैनन् ।” राजकुमारले विश्वस्त बनाउने प्रयास गर्‍यो ।
“हेरौँ ।” चेतना अलमलिएको देखियो ।
“कोही त आउलान् नि । मसानघाट भएपछि मूर्दा अवश्य आउँछ ।” राजकुमारले आफूलाई पूरै माइनस गर्‍यो । कोहीमा पनि आफूलाई राखेन । आफ्नो हैसियत कोहीसम्म पनि देखाएन ।
“चिया पनि बनाउने हो कि बैनी ?” राजकुमारले भन्यो ।
“बनाउने त हो तर ।” चेतनाले आग्लो लगाइन् ।
“तर के ?” राजकुमारले बुझेर पनि अज्ञानता देखायो ।
“बुहुनी भएको छैन ।” चेतनाले भनिन् । चेतनाको यो शब्दले यसलाई घोच्यो । घाउ बनायो ।
“तिमीले पनि चिया खाने होला ।” राजकुमारले त्यति मात्र भन्यो ।
“तिमीलाई पनि तलतल लाग्यो होला ।” राजकुमारले भन्यो ।
“लागेको छ । पहिले त यो व्यापारलाई सोच्नुपर्‍यो ।” चेतनाले भनिन् ।
“त्यो त हो ।” राजकुमारले इन्कार गर्न सकेन ।
“बुहुनी नभै खान्न ।” चेतना झन् खुलिन् । राजकुमारको मुखमा काठको किला ठोकियो । फुत्त निस्केर जाने आँट पनि गरेन । बसौँ भने कति समय बस्ने ? मूर्दा कुरेर बसेको मलामीजस्तो ।
चिया खाने ग्राहक नआए पनि उसलाई त्यति चिन्ता थिएन । ती बूढाहरू आएपछि उसको सबै चिन्ता समाप्त हुन्थ्यो । ती बूढाहरूले यो होटेलमा कहिले पनि उधारो खाएको उसले देखेकी छैन । कहिलेकाहीँ तिनीहरूसँग ठूला नोट हुन्छन् । हजारका । कहिलेकाहीँ सयसयका चाङ । सयका नोटको चाङ देखेका समयमा उसले हिम्मत गरेर एउटा बूढोसँग मागेको थियो” पाँच सय होला हजुर ?
“छन् त छ । धेरै छ तर मैले कसैलाई पनि सापट दिने गरेको छैन । लिने पनि गरेको छैन ।” त्यो बूढोले खरो जवाफ दियो । त्यो मागको परिणाम भने राम्रै निस्कियो । त्यो बूढोले राजकुमारलाई एक गिलास दूध आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव गर्‍यो । अहिले पनि तिनीहरूमध्ये एउटाले चियाको प्रस्ताव गर्नसक्छ । नगर्न पनि सक्छ, सम्भावना आधा छ । तिनीहरू आइपुगेका छैनन् । प्रेस मालिक आँखा मिच्दै आयो ।
“आज रातभर काम गरियो । थकाई लागेको छ । निद्रा लागेको छ । मीठो एक कप चिया ख्वाउनोस् ।” प्रेस मालिकले भन्यो । पहिलो ग्राहक आएकोमा राजकुमार आशावादी भएको थियो ।
“बत्ती आएको समयमा प्रेस चलाउन पर्‍यो । राति मात्र बत्ती आउने पाली भएपछि कसो गर्ने ? काम नगरे प्रेसको ऋण कहाँबाट तिर्ने ? घर व्यवहार कसरी चलाउने ?” प्रेस मालिकको गुनासो थियो ।
“अनि कामदार पनि बोलाएको ?” राजकुमारले प्रश्न गर्‍यो ।
“चाहिने कामदार त बोलाउनै पर्‍यो नि ।” प्रेस मालिकले जवाफ दियो ।
“दाइ । तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंले मलाई कति तिर्न बाँकी छ ?” चेतनाले प्रश्न गरिन् ।
“कति भयो ?” राजकुमारले थाहा नपाएको अभिनय गर्‍यो ।
“हिजोसम्मको चौध हजार । आजको एक कपको जोड्दा चौध हजार दस रुपियाँ ।” चेतनाले हिसाब बुझाइन् ।
“ठीक छ । हिसाब राम्ररी राख्नु । म पैसा हुनासाथ तिम्रो पहिले तिर्छु ।” चेतनाले बुझ्नेगरी राजकुमारले जवाफ दियो ।
“तपाईंसँग कहिले पैसा हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छैन । मलाई भने अहिले नै अप्ठ्यारो छ । तपाईंलाई थाहा नै छ, मेरो लोग्ने पचास डिग्रीको गर्मीमा काम गरिरहेको छ । उसै त मान्छे रोगी छ । मान्छे बाँचेर आउँछ कि लास आउँछ ? केही भन्न सकिँदैन । उसले पैसा नपठाएको चार महिना भैसक्यो । उसले पठाएको पैसाले छोराहरू पढिरहेका छन् । यो होटेलको आयस्ताबाट त घरभाडा र खाना खर्च मात्र भ्याउँछ । बीचबीचमा बिरामी हुइँन्छ । मलाई कति गार्‍हो छ ।” चेतनाको विलौना लामै थियो ।
“बैनी ! मैले पनि घरमा पैसा राखेर यहाँ उधारो खान आएको होइन । एउटा मात्र काम मिलोस् सब बादल फाट्छ ।” राजकुमारले चेतनालाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्‍यो ।
“एउटा कुरा भनौँ दाइ !” चेतनाको चेतना खुल्यो ।
“यो होटेल त दाइको लागि नै खोलेजस्तो भयो ।” चेतनाले पेस्तोल चलाइन् । त्यसको गोली राजकुमारको छातीमा लाग्यो । राजकुमारले छातीमा बुलेटप्रुफ ज्याकेट लगाएको थियो, छोएन । पटक्कै छोएन ।
“के छ त राजकुमारजी ?” त्यो ठूलो मान्छेको प्रश्न थियो ।
“के हुनु हजुर ! दुःख पाइएको छ ।” राजकुमारले दुःखेसो पोख्यो ।
“दुःख पाउनुभएको छ ? एउटा काम गर्नोस् । सुख पाउनुहुन्छ ।” ठूलो मान्छेले भन्यो ।
“भनिबक्सिस्यो न । हजुरले भनेको काम गर्छु ।” राजकुमार तत्पर भयो
“मसँग मेरो घर हिँड्नोस् ।” ठूलो मान्छेले भन्यो ।
“यो घर बेच्न पर्‍यो ।” ठूलो मान्छेले भन्यो ।
“घर त नयाँ छ । ठूलो पनि छ । हजुरले आफैँ बस्न बनाएको होइन ?” राजकुमारले प्रश्न थियो ।
“आफैँ बस्न बनाएको हो तर अहिले छोराहरू अमेरिकामा नै बस्ने भए । मेरी श्रीमती पनि तिनीहरूसँग बस्न गैसकेकी छिन् । मेरो पनि ठेगान भएन ।” ठूलो मान्छेले भन्यो ।
“कति मूल्य तोकिबक्सेको ?” राजकुमारले प्रश्न गर्‍यो ।
“डेढ करोड । तपाईंलाई दस लाख ।” ठूलो मान्छेले ठूलै प्रस्ताव राख्यो ।
“प्रस्ताव त राम्रै हो हजुर ।” राजकुमारले भन्यो ।
“मलाई हतार भएर । यो बेच्नका लागि बनाएको घर होइन । आफ्नै परिवार बस्न बनाएको ।” ठूलो मान्छेले भन्यो ।
“मेरो लागि यो एक्काइसौँ प्रस्ताव हो ।” राजकुमारले भन्यो ।
“सफलताको नि ! ” ठूलो मान्छेको प्रश्न थियो ।
“शून्य ।” राजकुमारको जवाफ थियो ।
“कोसिस गर्नोस् । यो नै पहिलो हुन्छ कि के ठेगान ?” ठूलो मान्छेले आशा जगायो ।
“नमस्कार साब ।” उसले काउन्टरमा बसेको प्रहरीलाई भन्यो ।
“के छ राजकुमार ! आज ढिलो आयौ ।” प्रहरीले भन्यो ।
“ढिलो भए पनि हजुरहरूको आदेशको पालना गरिरहेको छु । ” राजकुमारले भन्यो ।
“हाजिरी जनाएपछि मात्र आदेशको पालना हुन्छ । प्रहरीले भन्यो ।
“त्यो त हो हजुर । त्यो पनि नहोस् नपरोस भन्न खोजेको । ” राजकुमारले भन्यो ।
“अरूले भए तिमीलाई यहीभित्र राख्थे । तिमीलाई हामीले यो छूट दिएको । हाम्रो गुन तिमीले खोइ मानेको ।” प्रहरीले धम्क्यायो ।
“म गुन बिर्सन्नँ ।” राजकुमारले भन्यो ।
“अब तिमीलाई यहीँ राख्न पर्लाजस्तो छ । ” प्रहरीले भन्यो ।
“त्यसो नभनिबक्सियोस् साब । धेरै काम छ ।” राजकुमारले भन्यो ।
“तिमीले काम छ त भन्यौ तर यस्तो काम नगर ।” प्रहरीले भन्यो ।
“मरी जाउँ हजुर । यो काम मैले गरेको होइन ।” राजकुमारले भन्यो ।
“सबै मान्छेले खासगरी टोलवासीले तिमीलाई नै शङ्का किन गर्छन् त ?” प्रहरीको प्रश्न थियो ।
“गरिब देखेर साब ।” राजकुमारले भन्यो ।
“आधार त्यही हो त ?” प्रहरीले भन्यो ।
“अरू त केही छैन । गरिबले जे पनि गर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ । कसो गरुँ ?” राजकुमारले भन्यो ।
“त्यस्तो ठाउँमा बस्न छोड ।” प्रहरीले भन्यो ।
“त्यहाँ मैले सित्तै बस्न पाएको छु । अन्तै मैले मासिक तीन हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।” राजकुमारले विवशता पोख्यो ।
“तिमीले सित्तै बस्न कसरी पायौ ?” प्रहरीको प्रश्न छ ।
“घर मालिक अन्तै बस्छन् । मलाई विश्वास गरेर कुरुवा राखेका छन् । म त कुरुवा हुँ हजुर ।” राजकुमारले जानकारी दियो ।
“तिमी त भाग्यमानी रहेछौं ।” प्रहरी भन्छ ।
“किन र साब ?” राजकुमार प्रश्न गर्छ ।
“यस्तो मौका सबैले पाउँदैनन् । यो त तिम्रा लागि ठूलो सहुलियत हो ।” प्रहरी भन्छ ।
“त्यो त हो हजुर । त्यति सहुलियतले जीवन नचल्ने रहेछ ।” राजकुमार भन्छ ।
“तिमीलाई टोलवासीले चोर नै देखेका छन् ।” प्रहरी पुराना कुरामा नै जान्छ ।
“गरिबीकै कारण मलाई दोषारोपण गरिएको छ । मेरी स्वास्नी अर्काको घरमा काम गर्ने । म बेरोजगार । यस्तो मान्छेलाई दोष लगाउन सजिलो छ ।” राजकुमारले थप्यो ।
“गरिब त यो देशको आधा जनसङ्ख्या नै छ । ती सबलाई चोरीको आरोप त लागेको छैन ।” प्रहरी केरकारमा उत्रेको छ ।
“गाउँमा त सबैले मलाई पनि आदर गर्थे ।” राजकुमार भन्छ ।
“काल आएपछि स्याल सहर पस्छ भन्थे । तिमीलाई त्यस्तै भएछ ।” प्रहरी भन्छ ।
“धनी हुन सहर पसेको । उल्टो चोरीको आरोप खेप्न परिरहेछ ।” राजकुमार भन्छ ।
राजकुमार भन्छ । गरिबका लागि चोरी गर्न पनि जायज हुने तर्क दिन्छन् चोरहरू ।” प्रहरी भन्छ ।
“हो साब ।” राजकुमार भन्छ ।
“अब त साँचो बोल राजकुमार ! कसरी चोरी गरियो ?” प्रहरी भन्छ ।
“गरिएन साब ।” राजकुमार भन्छ ।
“अघि मैले भनेका कुरा सही भनेको होइन त ?” प्रहरी भन्छ ।
“सिद्धान्ततः सही भनेको । व्यक्तिगतरूपमा भन्दा गरिब भए पनि म चोर होइन ।” राजकुमारले आफ्नो अडान छोडेको छैन ।
“अब बहस नगर । सही गर । जाऊ । ” प्रहरी भन्छ ।
“हरेक दिन हाजिरी दिन आउँदा दिक्क भैसकेँ । केही उपाय छैन हजुर ?” राजकुमार आफ्नो दिक्दारी पोख्छ ।
“उपाय छ । सजिलो छ । यो चोरी गर्ने मान्छे पत्तो लगाउनोस् । तपाईंको छुट्टी हुन्छ ।” प्रहरी तिमीबाट तपाईंमा उक्लन्छ ।
“हजुरहरूले चाहेमा सक्नुहुन्छ । मजस्तोले कसरी सक्छु ?” राजकुमार विवशतासँगै असमर्थता देखाउँछ ।
“हामी पनि विवश छौँ । चोर पत्ता नलागेसम्म तपाईंले हाजिरी दिनुपर्छ ।” प्रहरी भन्छ ।
“मेरो बिन्ती छ । साबहरूले पत्ता लगाए म यो गुन बिर्सने थिइनँ ।” राजकुमार भन्छ ।
“हाजिरी गर र जाऊ ।” प्रहरी तिमीमा ओर्लन्छ । प्रहरीको मुड परिवर्तन भएको छ ।
“हजुर म पनि खाउँ कि ?” राजकुमारले बिन्ती गर्‍यो ।
“तपाईंले पनि खानुहुन्छ भन्ने मैले कल्पना नगरेको ।” त्यसले भन्यो ।
“हजुरले सही कल्पना गरेको हो । अहिले त खण्डखातिरले खान लागेको ।” राजकुमारले भन्यो ।
“त्यस्तो के पर्‍यो ?” उसले प्रश्न गर्‍यो ।
“मैले अहिले हरेक दिन प्रहरी थानामा हाजिरी दिन जानुपरेको छ ।” राजकुमारले भन्यो ।
“किन ?” उसले प्रश्न गर्‍यो ।
“मलाई चोरीको आरोप लागेको छ ।” राजकुमारले भन्यो ।
“के चोर्नु भयो ?” उसले सोध्यो ।
“के म चोर देखिन्छु हजुर ?” राजकुमारले दुई पेग खाइसकेको थियो । भटमास, चिउरा, आलु खाइसकेको थियो ।
“मलाई थाहा छैन ।” उसले भन्यो । “हजुरले थाहा छैन किन भनेको ?” तेस्रो पेग राजकुमारले खाइसकेको थियो ।
“अनुहारले केही थाहा हुँदैन ।” उसले भन्यो ।
“मरी जाऊँ हजुर ।” राजकुमारले चौथो पेग माग्यो । एउटै घुट्को बनायो ।
“प्रहरीले किन शङ्का गर्‍यो त ?” उसले सोध्यो ।
“मलाई गरिब देखेर हजुर । चोर मान्छेले स्वास्नीलाई अर्काको घरमा भाँडा माज्न कसैले पठाउँछ ।” राजकुमारले पाँचौँ पेग लोकल स्वाट्ट पार्‍यो ।
“मलाई थाहा छैन ।” उसले भन्यो ।
“किन त्यसो भनेको ?” राजकुमारले प्रश्न गर्‍यो ।
“यो पनि त्यस्तै कुरा हो, अनि मान्छे भ्रष्ट हुँदैन ।” उसले भन्यो ।
“मेरो एउटा मात्र काम भएको भए सबको मुखमा बुझो लाग्थ्यो । आज काम हुन्छ भन्यो हुँदैन । भोलि काम हुन्छ भन्यो, हुँदैन । श्रीमतीलाई आशा देखाउँदा देखाउँदा आशा नै हास्यास्पद भयो ।” राजकुमारले भन्यो । उसले जवाफ दिएन ।
“राजकुमारजी ! अब म जान्छु । तपाईंको जम्मै तिर्छु ।” जाँदाजाँदै राजकुमारको पाँचौँ पेगको पैसा तिर्‍यो ।
प्रथम पटक प्रकाशित : मधुपर्क २०६८ साउन
« पानीफोटोमा ‘नेपालभरका एफएम’हरु लाईभ सुन्न सकिन्छ है ‘विवाह’ – व्यंग्य »	1 comment to एउटा चराको प्वाँख
· जवाफ दिनुहोस्	यो कथाको शिर्षक एउटा चराको प्वाखँ चै किन राखेको होला भन्ने कति गर्दा पनि बुझिन । कथाको प्लट र प्रस्तुति दुबै राम्रो हुँदा हुँदै पनि शिर्षक चै अर्कै कथाको परे जस्तो लाग्यो ।
यही Category बाटकटहरे बुढी – कथानक्साको पुरुष – कथागर्मीमा पग्लिँदा वैँशहरुब्यूटिफूलअतृप्त प्यास – कथासेविका – कथास्वार्थी संसार – लघुकथामौन प्रेमी – कथापुस्तकालयको रातो भित्तो – कथामसली भाउजु – कथाOnline Users8 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार